Coral Reef: ဒီနှစ်သင်္ကြန်
Coral reefs are aragonite structures produced by living organisms, found in marine waters containing few nutrients. Coral reefs most commonly live in tropical waters, but deep water and cold water corals exist onamuch smaller scale. (Wikipedia)
Posted by ဇွန်မိုးစက် | Posted on Tuesday, April 13, 2010
Category: In life
သင်္ကြန်နဲ့ဝေးခဲ့တာ၊ သင်္ကြန်မှာ ရေမဆော့ မကစားဖြစ်တာ တော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ နောက်ဆုံးရေပက်ခံထွက်၊ ရေကစားဖြစ်ခဲ့တာ ၉တန်းစာမေးပွဲဖြေပြီးတဲ့နှစ်ကပါ။ နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ အမေနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုက်၊ တရားစခန်းဝင်၊ အပြင်သင်တန်းက စာမေးပွဲတွေနဲ့ ရက်တိုက်၊ ဘယ်မှမသွားဖြစ်ရင်လည်း အိမ်မှာစာအုပ်တွေဖတ်၊ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်၊ နောက်မြန်မာပြည်နဲ့ ဝေးတဲ့နေရာရောက်နဲ့ တောက်လျှောက်သင်္ကြန်ရေနဲ့ မထိတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီအချိန် သင်္ကြန်ကျနေပြီဆိုတာတဲ့ အတွေးလောက်ပဲရှိလိုက်တယ်။ ထူးထူးခြားခြားတော့ သိပ်မခံစားမိခဲ့တာ အမှန်ပါ။
ဒီနှစ်သင်္ကြန်ကတော့ ခါတိုင်းနှစ်တွေလို ဖာသိဖာသာ ဝေးရာမနေတော့ဘဲ ကိုယ့်အနီးရောက်လာပါတယ်။ gtalk နဲ့ mobile က message တွေ၊ Forward လုပ်လာတဲ့ email တွေအပြင် ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာတွေမှာ ပိတောက်ပန်းတွေ အပြိုင်အဆိုင် ဖူးပွင့်ဝေဆာကြ၊ တစ်အိမ်တက်ဆင်း ရေတွေလိုက်လောင်းကြ၊ အိုးမဲသုတ်ကြ၊ ဆုတောင်းပေးကြ၊ သံချပ်တွေ သံပြိုင်ထိုးကြနဲ့ သင်္ကြန်အငွေ့အသက်တွေ ကိုယ့်ဆီကို လွှမ်းခြုံလာသလိုပါပဲ။
ချစ်ခင်ရတဲ့ ဘလော့ဂ်ရေးဖော်ရေးဖက် မောင်နှမတွေနဲ့အတူ သင်္ကြန်ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် စုပေါင်းစပ်ခွင့်ရခဲ့တာရော၊ ဘလော့ဂ်ဂါ ရိပ်မြုံလေးတစ်ခုမှာ ကျင်းပတဲ့ ဧပြီညီအစ်ကိုမွေးနေ့ပွဲကို တပျော်တပါး တက်ရောက်ခွင့်ရတာရော ကိုယ့်အတွက် ဒီနှစ်သင်္ကြန်က အမှတ်တရဖြစ်သွားစေတာအမှန်ပါ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ခုတစ်လော ရုံးမှာ pressure တွေ သိပ်များပါတယ်။ မန်နေဂျာကလည်း ကိုယ့်ကိုမှရွေးပြီး တော်တော် push လုပ်တယ်လို့ ထင်ရတဲ့အနေအထားပါ။ မနေ့ကနဲ့ ဒီနေ့ နှစ်ရက်စလုံး ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး အလုပ်တွေများနေလို့ အွန်လိုင်းတောင် မတက်နိုင်ဘူး။ သူများတွေကို ရေပက်ချင်တာရော .. ကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခံချင်တာရောပေါင်းပြီး မန်နေဂျာအလစ်မှာ ၀င်လိုက်သေးတယ်။ အကုန်လုံးမှာလည်း သင်္ကြန်ဆုတောင်းတွေနဲ့ ဝေေ၀ဆာလို့။ သင်္ကြန်မုဒ်တောင် ၀င်လာသလိုလို။
ညနေ ၄ နာရီလောက်မှာ အံ့သြပျော်ရွှင်စွာ သိလိုက်တာက သင်္ကြန်ဟောလီးဒေးမုဒ်ဝင်သူက ကိုယ်မဟုတ်ဘဲ မန်နေဂျာဖြစ်နေပါရော့လား။ မနက်ဖြန်ကစပြီး သောကြာနေ့ထိ သူခွင့်ယူသွားတယ်လေ။ ဒါဆို ကိုယ်လည်း မနက်ဖြန်အွန်လိုင်းပေါ်တက်ပြီး သင်္ကြန်ဝင်ကျလို့ရပြီပေါ့။ မန်နေဂျာခွင့်ယူတဲ့ ဒီနှစ်သင်္ကြန်က ပိုပျော်စရာ ကောင်းတယ်နော်။ ရှူး..... တိုးတိုး .... သူကြားသွားဦးမယ်။ ;)
ရေတမာ said on April 13, 2010 at 8:47 PM
ကဲသာကဲ ကဲသာကဲ အွန်လိုင်းသင်္ကြန်ကြီး ကျင်းပကြတာပေါ့ အမရေ
ချစ်ကြည်အေး said on April 13, 2010 at 9:07 PM
ဟားဟား ပျော်စရာကြီးပေါ့...အွန်လိုင်းသင်္ကြန်မှာ တူတူ ပျော်ကြတာပေါ့ ညီမဇွန်ရေ...ရေပက်သွားပြီဟေး...ဗွမ်း ဗွမ်း ဗွမ်း...!!
kaungkinpyar said on April 14, 2010 at 12:18 AM
ညလေးးးးးးးးးရေလောင်းပါရစေ....အိမ် လာခဲ့ပါဦး...အမြဲ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆို နေပါတယ်...
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on April 14, 2010 at 3:26 AM
စနိုးတောင်တွေပေါ်က သေသေချာချာခံထားတဲ့ ရေအေးအေးလေးနဲ့ ဖြည်းဖြည်းလေးလာလောင်းသွားတယ်။ :D
ဖိုးစိန် said on April 14, 2010 at 5:18 AM
မဇွန်အတွက် အမှတ်တရ ဖြစ်တယ်. ကျေနပ်တယ်. ပျော်တယ်ဆိုရင် ကျနော့်အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ အချိန်တိုင်းအတွက် ကျနော်တို့ အိမ်က တံခါးဖွင့်ထားပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွင်ပါစေ ။
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် said on April 14, 2010 at 7:51 AM
သင်္ကြန်ဆိုတာ ရေမပက်ပဲ လေပက်နေရာ အတော်ကြာပြီ..
မန်နေဂျာ မရှိတုန်း ပျော်ရွှင်ပါစေ...
Rita said on April 14, 2010 at 8:35 AM
Wunna said on April 14, 2010 at 9:22 AM
Moe Cho Thinn said on April 14, 2010 at 10:30 AM
မန်နေဂျာကြီး မရှိတာ ၀မ်းသာလို့ ညီမကို မီးသတ်ပိုက်နဲ့ ထိုးသွားတယ်။ ဟိ..
အင်ကြင်းသန့် said on April 14, 2010 at 11:09 AM
ဘယ်ရမလဲ...ပေး ပေး ...အဲဒီမန်နေဂျာဖုံးနံပါတ်...တိုင်ကိုပြောဦးမှာ ...မပေးလို့ကတော့ အိမ်တိုင်ရာရောက်လာမှာနော်...အိုးမည်း အသုတ်ခံရဖို့သာပြင်ထား... :D
တနင်္ဂနွေ ဓမ္မကျောင်း (Sunday School)
နှစ်သစ် (မေတ္တာပို့) ဆုတောင်း
Blog Silence Day-16 Apr 2010
Remix Thingyan 2010
Reading and my favourites
အမှတ်တရ မကာအို (၄)
Weekly Eleven Online Journal
မွေးနေ့လက်ဆောင် ( သံသာလေကမ်းတိုင် )
Article (4)
Birthday ( 15 )
Childhood (3)
Essay ( 12 )
Feelings ( 19 )
Hobby (4)
I Miss You (6)
In life ( 42 )
Me ( 16 )
Memoirs ( 30 )
Miscellaneous ( 19 )
Pen Name ( 1 )
Poem ( 16 )
Sharing ( 19 )
Song (3)
Story/Short Story ( 27 )
Tag (9)
Thoughts/Views ( 11 )
To my friend (3)
Wishes ( 12 )
Weather, Calendar & Visitors
© All Rights Reserved. Coral Reef